निर्मलाकि आमा दुर्गादेवीले रगतको नमूना दिदा बाबु यज्ञराज पन्तको असहमति ,, – Ranga Darpan
निर्मलाकि आमा दुर्गादेवीले रगतको नमूना दिदा बाबु यज्ञराज पन्तको असहमति ,,
पुस २६ , काठमान्डौ – गत साउन १० गते कञ्चनपुरकी बालिका निर्मला पन्तको बलात्कारपछि हत्या भएको थियो। जसको न्यायको लागि विपक्षि पार्टी आम नेपालि जनताले निर्मालाको लागि न्याय माग्दै गर्दा अहिले भने उनको परिवारमा केहि विग्रह देखिएको छ ।
लामो समयदेखि निर्मलाको हत्यारा पत्ता नलागेपछि निर्मलाकी आमाले निर्मलाको शवबाट निकालिएको भजाइनल स्वाबको बैधानिकता जाँच्न आमा दुर्गादेवीले बुधबार डीएनए टेष्टका लागि रगतको नमूना दिएकी थिइन् ।
तर, उनको यो निर्णयमा श्रीमान यज्ञराज पन्तले आपत्ति जनाएका छन् । निर्मलाको डीएनए साँचो हो कि होइन, जाँच्नुपर्ने हाम्रै माग थियो, त्यसका लागि रगत दिन मैले श्रीमानलाई धेरैपटक भनेँ तर, उहाँले मान्नुभएन’ दुर्गादेवीले भनिन्,।
बुधबार मैले एक्लै भए पनि गएर रगत दिएँ । निर्मला पन्तको भनिएको भजाइनल स्वाव निर्मलाकै हो कि नक्कली हो भन्ने पत्ता लगाउँदा पीडित परिवारलाई नै फाइदा पुग्ने देखिन्छ ।
यसका लागि निर्मलाकी आमा वा बुबाको रगत परीक्षण गरेर म्याच गर्दा निर्मलाको भनिएको भजाइनल स्वावको बैधानिकता थाहा हुन सक्छ । तर यो विषयलाई लिएर भने उनका पति यज्ञराज पन्त र पन्त कि दोश्री पत्नीले उनीमाथि हातपात समेत गरेको छिमेकीले जानकारी गरेका छन्। यज्ञले पत्नी दुर्गालाई भनेका छन् ,मलाई नसोधी किन रगतको नमुना देको के मलाई फसौना खोजेको हो ?
नीतालाई पञ्चायतबाट ग्लोबल नेपाली फिल्म अवार्ड ,,
सरकारले भनछ डा. केसीका अधिकांश माग पूरा भइसक्यो ,,